Jakoba zanak' i Zebedeo - Wikipedia
Jakoba zanak' i Zebedeo
(tonga teto avy amin'ny Jakoba Zokiny)
I Jakoba Zokiny - nataon'i Guido Reni tanelanelan'ny taona 1636 sy 1638.
I Jakoba zanak' i Zebedeo na Jakoba zanak' i Zebedio na Jakoba zanak' i Zebede na Jakoba Zokiny dia iray amin' ireo mpianatr' i Jesoa roa ambin' ny folo lahy. Jiosy avy any Galilea izy. Rahalahiny i Joany apôstôly.
2 I Jaona zanak' i Zebedeo araka ny Baiboly
Atao hoe koa Jakoba Zokiny (na Jakoba Lehibe) izy sady rahalahin' i Joany zanak' i Zebedeo. Ἰάκωβος / Iakôbos no fiantsoana azy amin' ny teny grika. יַעֲקֹב‬ /Yaʿqob no fiantsoana azy amin' ny teny hebreo. Izy roa lahy ireo dia antsoina koa hoe Boanergés izay midika hoe "zana-baratra". Tsy afangaro amin' i Jakoba zanak' i Alfeo i Jakoba zanak' i Zebedeo. Tsy nanoratra epistily i Jakoba zanak' i Zebedeo. Tsy izy no nanoratra ny Epistilin' i Jakoba.
I Jaona zanak' i Zebedeo araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
I Jakoba zanak' i Zebedio na Jakoba Zokiny dia voaresaka ao amin' ny Evanjely sinôptika (ohatra, ao amin' ny Marka 3.17; Matio 10.2; Lioka 6.14) sy ao amin' ny Asan' ny Apôstôly (Asa 1.13). Rahalahin' i Joany apôstôly izy ary izy roa dia samy atao hoe Boanergesy, izay midika hoe "zana-baratra" araka ny Evanjelin' i Marka (Mar. 3.17). Ity evanjely tranainy indrindra ity dia maneho azy roa ho mpanjono tao amin' ny Farihin' i Tiberiada (na Tiberiasy) nefa namela ny sambokeliny mba hanarahany an' i Jesoa, izany dia voatantara koa ao amin' ny Evanjelin' i Matio sy ny an' i Lioka.
Sahala amin' i Petera sy i Andrea, i Jakoba dia isan' ireo mpianatra voantson' i Jesoa voalohany, ary iray amin' ireo mpianatra akaiky azy indrindra izy. Ny lovantsofina sinôptika dia manao azy amin' izy telo lahy ho ny apôstôly manan-danja indrindra satria izy no nofidin' i Jesoa voalohany, niaraka tamin' i Petera sy i Joany, ho vavolombelon' ny zava-niseho lehibe toy ny nananganan-ko velona ny zanakavavin' ny lehiben' ny sinagôga, ny fiovan-tarehy teny an-tendrombohitra na ny vavak' i Jesoa tao amin' ny Tendrombohitra Ôliva. Nefa, sahala amin' ireo apôstôly sisa rehetra dia namela an' i Jesoa ho voasambotra izy. Voatanisa miaraka amin' ireo mpianatra nitoetra tao amin' ny efitrano ambony i Jakoba tamin' ny nidinan' ny Fanahy Masina (Asa 1.13). Taterin' ny Testamenta Vaovao ny nahafatesany tamin' ny nisamborana an' i Petera (Asa 12.2).
Alfeo na Alfe
Zebedeo na Zebedio na Zebede
Jakoba zanak'i Alfeo
↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 et 1,4 André Benoit, « Les personnages de l'Évangile nommés Jacques », in Pierre Geoltrain (dir.), Aux origines du christianisme, Folio/Histoire, 2000 (ISBN 978-2-07-041114-6), p. 246-250.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakoba_zanak%27_i_Zebedeo&oldid=1038351"
Voaova farany tamin'ny 2 Oktobra 2021 amin'ny 11:01 ity pejy ity.